सित्तैमा अमेरिका जान चाहानेहरुका लागि खुसीको खबर: २०२१ का लागि डीभी खुल्यो, – सुदूरखबर डटकम
सित्तैमा अमेरिका जान चाहानेहरुका लागि खुसीको खबर: २०२१ का लागि डीभी खुल्यो, डीभी भर्दा पासपोर्ट नम्बर र इमेल अनिवार्य
label समाचार प्रकाशक query_builder October, 02 2019
काठमाडौं, १५ असोज । सयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२१ का लागि अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) को आवेदन खुलाएको छ । बुधबार मध्याह्न १२ बजेदेखि खुलेको अनलाइन आवेदन ५ नोभेम्बर २०१९ मध्याह्न १२ भर्न सकिने जनाइएको छ ।
यस वर्ष आवेदन फारममा कडाइ गरिएको छ । जसअनुसार फारम भर्नु भन्दा अगावै पासपोर्ट बनाउनु पर्नेछ । फारम भर्दा पासपोर्ट नम्बर, पासपोर्टको म्याद र इमेल ठेगाना अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यसैगरी एक व्यक्तिले एक पटक मात्र आवेदन दिन सक्ने छन् । एकभन्दा बढी पटक आवेदन फारम भर्ने व्यक्ति डीभीका लागि अयोग्य ठहरिने छन् ।
यस वर्ष ५५ हजारले डीभी चिठ्ठामार्फत् अमेरिकाको भिसा पाउने अमेरिकी अधिकारीहरु बताउँछन् । व्यक्तिगत विवरणको आधारमा कम्प्युटर सिस्टमले डीभीको लागि योग्य व्यक्तिहरुको छनोट गर्नेछ । तर डीभी पर्दैमा अमेरिकाको भिसा पाउने निश्चित हुँदैन । त्यसपछि पनि बिभिन्न शर्त र प्रक्रियाहरु पूरा गर्नु पर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस वर्ष भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशसहित १७ देशका नागरिकहरुले भने डीभीको फारम भर्न पाउने छैनन् । त्यसैगरी डीभीको आवेदन दिन नपाउने देशहरुमा चीन (मुख्य भूमिमा जन्मिएका), ब्राजिल, क्यानडा, कोलम्बिया, डोमिनिक रिपब्लिक, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, जमैका, मेक्सिको, नाइजेरिया, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, बेलायत (उत्तरी आयरल्याण्ड बाहेक) र भियतनाम छन् ।
किनभने यी देशहरुका ५० हजार नागरिकलाई डीभी परिसकेकाले निवेदन दिन नपाउने भएका हुन् । तर, चीनको मुख्य भूमिमा जन्मिएका बाहेक हङकङ, मकाउ र ताइवानका बासिन्दाले भने डीभी भर्न पाउने छन् ।
शनिबारको दिनमा शनिदेवको दशा हटाउन के गर्ने ? राशीअनुसार फरक फरक जुक्ती
यसपालीको तिहारमा मनग्य लाभ लिन चाहानुहुन्छ भने तिहार अगावै यस्ता कार्य गर्नुहोस
जोतिश सास्त्र अनुसार यी ३ राशिका नारीलाई गरगहना नलाएकै राम्रो, हैन भने आफ्नैलागि नोक्सानी
घरायसी हिङ्सा र कलह बाट मुक्ती चाहानुहुन्छ भने वास्तु शास्त्रअनुसार उत्तरदिशामा कुच्चो नराखौ !
मंगलबारको दिनमा यस्ता क्रियाकलाप गर्नाले मनोकामना पुराहुने धार्मिक विश्वास
आज सोमबार, आजको दिनलाई फलिफापमय बनाउन चाहानुहुन्छ भने अपनाउनुहोस यी कार्य